10 Jiidasho iyo Daar wayn In France By tareenka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Jiidasho iyo Daar wayn In France By tareenka
Ma jeceshahay safraya tareen? Ma jeceshahay arkaya qalcado la yaab leh in dal sida France? Haddii ay taasi kiiska, ka dibna aad gaadhay meel sax ah. Taasi waa maxaa yeelay this article “10 Jiidasho iyo Daar wayn In France By tareenka” ku siin doonaa liiska kama dambaysta ah oo ka mid ah toban iyo Daar wayn ugu soo jiidasho badan ee France. Waa maxay more, waxaan kuu sheegi doonaa sida loo gaari tareen!
1. Chateau ah Chenonceau
Chateau ah Chenonceau waa mid u gaar ah sida ay dhiseen on aasaaska dhagax wax ku 16th qarnigii. Waxaad si fudud u awooddo gaadhayaan via tareen sida qalcaddii waa mid aad u dhow in a Idaacadda. Waxaad ka heli kartaa Tours in ay, magaalo weyn oo si macquul ah u dhow qalcaddii.
Nantes in Tareenadu Tours
Lille si ay Tareenadu Tours
Waxay ku taallaa in ay Chantilly Estate, qalcaddii kanu inuu runtii yahay booqo marka aad aragto sida ay u egtahay. Waa meel u dhow xarunta of Paris taas oo ka dhigaysa safraya waxa neecaw in.
3. Xarunta Fontainebleau
Haa, waa farsamo Daar, laakiin yaa, waxaa breathtaking! Waxay dhisay Fontainebleau dib ugu soo 12th qarnigii, oo ay weli u muuqataa cajiib ah oo si fiican u hayn. Waxa kale oo ay fududahay in la soo booqdo. Waxaad ku gaari kartaa Paris in ka yar hal saac la Transilien line R.
Waxaad ka heli kartaa qalcaddii qurux badan gudahood ah park dabiiciga qaranka taasi waa sax ka baxsan Paris. Si kastaba ha ahaatee, booqashada this qalcaddii qurux tareen waa yara adag maadaama ay jirto kaliya Slaam ah in si toos ah u dhaco, waxa uu. Ugu yaraan waxaad weli ku raaxaysan kartaa tareen kortaan Paris!
Chambord Castle waa qalcaddii si dhab ah mesmerizing oo araggiisu in ay mudantahay booqanaya. Si aad u hesho in ay, waxaad u baahan doontaa taksi ama Slaam magaalada Blois. Si kastaba ha ahaatee, gaarey Blois waa la heli karo laga saaray magaalooyin badan ee France. Waxaad ka heli kartaa in ay wax ka yar saacad iyo badh ah marka aad safarka ka soo Paris.
qalcaddii Amboise ka mid ah iyo Daar wayn ugu soo jiidasho badan ee France. Waa jawharad dhab ah naqshadaha ka Renaissance ah. Waxaad gaari karo Chateau si fudud tareen ka dhowr magaalo oo France via a TGV ama Intercity tareenada.
7. Qalcaddii caanka ahayd ee Chateau de Monte-Cristo
Waxaan aad ugu boorinayna this cute, qalcaddii yar sida caanka ah Alexandre Dumas dhisay! Waxaad gaari kartaa Monte Cristo Castle si fudud la line a tareen maxalliga ah waa xaq ee Paris! Iyadoo taas maskaxda, waxaad qaadan kartaa tareenka kasta haddii aad soo socda meel kale ka.
8. Qalcadda Amale ee Chateau d'Azay-le-Rideau
Waa qalcaddii a dhab ah heer yar dhisay xaq jasiiradda gudaheed u gudubno, a yar yar! Ma heli kartaa wax prettier badan this. Waxaad ka heli kartaa in qalcaddii si fudud by qaadashada nus tareenku saacad magaalada Tours ka. Markaas waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay sameeyaan socod 20 daqiiqo ah si ay qalcaddii.
Waxaa ka mid ah Daar wayn ugu soo jiidasho badan ee France Ma laga yaabaa in, laakiin waxaan lahaa in ay ka mid ah. qalcaddii waa hodan ku ah taariikhda, waana dhab ah breathtaking, ma aha oo kaliya in ay ku soo jiidasho! Tareen isteeshanka ugu dhow in qalcaddii waa in Selestat, oo aad ka gaari karin ka Strasbourg ama dhowr magaalo oo kale oo u dhow.
The Chateau de Pierrefonds waa shaki la'aan ah ugu mudan isagoo liiska ku saabsan Daar wayn ugu soo jiidasho badan ee France. Waxaad gaari karaa oo kaliya qalcaddii by qaadashada tareen si ay u Compiegne, markaas qaadashada a baska si Pierrefonds.
Haddii aad u baahan tahay Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan safarka tareenka 10 Jiidasho iyo Daar wayn In France By tareenka, aad awoodid nala soo xidhiidh dhex our site.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcharming-castles-france%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Qalcado europetravel safarka travelfrance